Saugat Malla – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
लुट फिल्ममा हाकु काले चरित्रले चर्चित बनेका सौगात मल्लको र मोडल सोनि केसि बिच प्रेम अंकुराउन थालेको खवर छ । यस अघि लामो समयसम्म अभिनेत्री सरिता गिरिसँग प्रेममा रहेर छुट्टिएका सौगातको यो नयाँ सम्बन्धलाइ सौगात र सोनिले प्रेमको नाम नदिए पनि, उनिहरु बिचको निकटता साथि साथि भन्दा अलिक बढि नै रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
आजको भिडियोमा चर्चा गरिएका मुख्य कुराहरु निम्न छन:
सौगात मल्लको र सोनि केसि को बिचमा सम्बन्धको बारेमा कसरि थाह भयो ?
सौगात र सोनिको सम्बन्ध कति लामो हो ?
सौगातले सो सम्बन्धको बारेमा के भन्छन ?
सौगातको यस अघिको अभिनेत्री सरिता गिरिसँगको सम्बन्ध कसरि शुरु र अन्त्य भयो ?